ERP Solution | Tech Plus Solution
Odoo Solution Myanmar
When you are thinking of switching or upgrading your business into all in one digital solution like ERP, such as Odoo , you are in the right place with TPS
OdooSM is one of our services supporting Myanmar Entrepreneurs and SME to reach to the next level of enterprise in modern world .
The only platform you will ever need to help run your business:integrated apps, kept simple, and loved by millions of happy users.
Odoo has an app for every need such as
Odoo Modules Integrated
Choose General ERP Plan
Suitable for5users and having less amount of workload at the same time
24x7 support and Weekly Backup
Free three modules training and free domain name for first year with one year contract
Suitable for 10 users and having less amount of workload at the same time
Suitable for 10-30 users and having moderate amount of workload at the same time
+Server installation one time fee: MMK 150,000.0
Get annual plan with free domain and3business mails
Let's us know how you will apply Odoo ERP and we will choose the best optimal server specifications with the best price!
Odoo ERP အတွက် လူမေးများသော မေးခွန်းများ
Odoo ERP က ဘယ်လို Software မျိုးလဲ ဘာတွေသုံးလို့ရလဲ
Odoo ERP က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ အသုံးဝင်တဲ့ သုံးလေ့ရှိတဲ့ ဆော့ဝဲတွေ အက်ပလီကေးရှင်းတွေ စုစည်းထားတဲ့ ဆောဝဲ အစုအ​ဝေးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Odoo မှာ
လုပ်ငန်းသုံး Sale ( အရောင်း)
CRM ( customer relationship management အရောင်းဆက်ဆံရေး)
Accounting ( စာရင်းဇယား)
Manufacturing ( ထုတ်လုပ်ရေး)
Inventory ( ကုန်ပစည်းထိမ်းသိမ်းရေး)
HR management ( ဝန်ထမ်းရေးရာများ)
ပြီးတော့ အရောင်းဆိုင် အတွက် POS
Project management အတွက် Project စတဲ့
software တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ဒါ့အပြင် web site တစ်ခုကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဖန်တီးနိုင်ပြီး E commerce အဖြစ်နဲ့ လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Product တွေကို အလွယ်တကူ တင်ရောင်းနိုင်ပါတယ် လိုအပ်ရင် E-Learning ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်တဲ့ အပြင် blog တွေ Event တွေလည်း website မှာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
လိုချင်တဲ့ Features တွေထပ်ဖြည့်လို့ရလား ပြင်လို့ရလား
ဟုတ်ကဲ့ open source ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြင်လို့ ဖြည့်လို့ရပါတယ် အသင့်ရှိနေတဲ့ third party module market ကနေလည်းဝယ် ပြီးFeatures တွေဖြည့်နိုင်ပါတယ် တချို့အရေးပါတဲ့ module Accounting , payroll စတဲ့ module တွေဆိုရင် Open-source version မှာ မပါတဲ့အတွက် third party module ထပ်မံထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်
Odoo က အလကားသုံးလို့ရလား
Open source နဲ့ Enterprise ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပြီး Open source ကတော့ မိမိဘာသာ server ထောင်သုံးနိုင်ပြီး Free ပါပဲ ။online server မှာတင်ရင် Server ဖိုး ကျသင့်သလောက်ကိုသာ ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် သုံးမယ့်လူ အရေအတွက် software ကန့်သတ်ချက် မရှိပါ Enterprise version ကတော့ သုံးစွဲသူ အရေအတွက် နဲ့ software module အလိုက်ကျသင့်တဲ့ ပမာဏကို လစဉ်ပေးရမှာပါဒီ လင့် မှာ အသေးစိတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
Open source နဲ့ Enterprise version ရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို ဒီမှာလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်
Odoo ထဲကို ကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်း အချက်အလက်တွေ ထည့်သွင်းဖို့ လွယ်လားမြန်လား
Odoo ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် အချက်အလက်တွေကို အလွယ်ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး excel ကနေလည်း import လုပ်ပြီးထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Internet မပါဘဲသုံးချင်ရင်ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ
ဒါဆိုရင် မိမိရဲ့ window စက်တစ်လုံးမှာ odoo ကိုထည့်သွင်းပြီး local server အနေနဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ် networks ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ တခြားစက်ကနေ လည်းလှမ်းယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်
Odoo ERP software အတွက်လစဉ်ကြေး ဘယ်လောက်ကျနိုင်မလဲ
ကျွန်တော်တို့ TPS ရဲ့ Odoo Service အနေနဲံ မှာ Open source Odoo ကို လုပ်ငန်းတိုင်းက online သုံးနိုင်အောင် Plan သုံးမျိုး စီစဉ်ပေးထားပါတယ် လစဉ်ကြေး အနေနဲ့
Budget Plan ( MMK 45,000)
Popular Plan ( MMK 65,000)
Silver Plan ( MMK 85,000) အထိလုပ်ငန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ plan ကိုရွေးချယ် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်
တစ်နှစ်စာဝယ်ယူသူများအနေနဲ့ domain နဲ့ email အကောင့်တစ်ခု တစ်နှစ်စာ FOC သုံးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးပါတယ်
Server Installation Fee MMK 150,000 ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
Odoo ကိုဘယ်လိုစမ်းသုံးလို့ ရမလဲ
TPS သို့ဆယ်သွယ်ပြီး အခမဲ့ တစ်လစမ်းသုံးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်.
Odoo ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲ သင်ကြားပေးပါသလား
TPS ကနေ plan ဝယ်ယူသူများအတွက် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု အနေနဲ့ မိမိနှစ်သက်ရာ module သုံးခုကို free training ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးခုထက်ပိုတဲ့ modules တွေအတွက် တော့ တက်ရောက်လိုပါက Training Fee ထပ်မံပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်